Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Xoogan oo Kadhacay Xuduuda Axmaarada Iyo Tigreega.
Dagaalo Xoogan oo Kadhacay Xuduuda Axmaarada Iyo Tigreega.
Posted by Dulmane	/ November 8, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Matama ee dhacda xuduuda Gobolada Axmaarada iyo Tigreega ayaa sheegaya dagaal xoogan oo dhex maray labo qoomiyadood oo deegaanadaas wada daga.
Sida xogta aan kuhelayno maleeshiyo katirsan qoomiyada Tigreega ayaa Weerar kuqaaday dad shacab ah oo u dhashay qoomiyada Axmaarada waxayna dileen dad badan oo shacab ah iyagoo weerarka ku eedeeyay in ay qaaday qoomiyada Qamamt oo dagta magaalada Matama.
Intaas kadib maleeshiyo kasoo jeeda qoomiyada Axmaarada ayaa laysay dad udhashay qoomiyada Qamamt si ay ugu aaraan dadkii lagalaayay, waxayna qoomiyada Qamamt kajawaab celisay weerarkii Axmaaradu ay kusoo qaaday.
Intaas kadib maamulka Gobolka Tigrey ayaa eedayn dusha usaaray qoomiyada Axmaarada, iyagoo ku eedeeyay in ay laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin.
Dhinaca kale maamulka Gobolka Axmaarada ayaa jawaab kabixiyay eedaynta Tigreega waxayna sheegeen in qoomiyada Tigreegu ay qalalaaso kawado deegaanada dhaca xuduuda Axmaarada iyo Tigreega. Iyagoo dhib gaar ah ugaystay qoomiyada Qamamt.
Xaalada amni ee deegaanada dhaca xuduuda Gobolada Axmaarada iyo Tigreega waxaana laga cabsi qabaa in ay dhibaatooyinku sii xoogaysteen.